Apple Inoburitsa WatchOS Beta 9 Mazuva mashanu Mushure meBeta 5 | Ndinobva mac
Maawa mashoma apfuura Apple yakaburitsa watchOS 9 beta 5 mazuva mana chete mushure mekupedzisira beta. Vashandisi havana kusiya zviitiko zvakakosha zve beta 4 yewatchOS 8 uye kana Apple haina kusiya chero chinhu chakakosha mumashoko avo, saka zvinoita sekuratidza kuti Apple iri kuwedzera kwese kuyedza kwayo kuve neyakagadzikana vhezheni yewatchOS 5.
Haisi yekutanga yekushandisa system ine mbiri mbiri vhiki ino. Iyo iOS 12 beta muenzaniso wakanaka weizvi, uchidzokorora iyo beta vhezheni svondo rino. Izvo zvichiri zvekare kuti uzive nhau dzeiyi 9 beta.
Chii chitsva muWatchOS 5:
Pamusoro pekuvandudzwa kwekuita kweshanduro dzazvino dzeApple Watch, Apple inoramba ichishanda zviitiko zvine chekuita nehutano uye kurovedza muviri. Nenzira iyi:
Tichaona mukana we goverana chiitiko chedu nevamwe vashandisi veApple Watch, inokosha yakakosha.
Pamusoro pe, zviitiko zvitsva, seyoga nekufamba musango.
Zvinowedzerwa chiitiko chitsva kutanga uye kumisa mashandiro, kumhanya, chinhambwe, cadence yambiro, pakati pevamwe
Kune rumwe rutivi, Iye zvino zvinogoneka kuyerera uye kuyananisa Podcast neApple Watch. Chinhu cheinovel kugona kugona nhepfenyuro odhiyo meseji kuburikidza neiyo itsva Walkie-Talkie app. Apple inopa kumwe kushanduka kune iyo mumapoka ezaziso, kuitira kuti vasaunganidze pawachi skrini.
Asi basa rinofanira kupa zvakanyanya kugadzirwa zuva nezuva-zuva neApple Watch yedu ndeye Simudza kutaura. Kubva pano tinogona kutaura naSiri nekungodzora ruoko. Panguva ino Siri anoteerera kune zvatinotaura kana tichida kukubvunza chimwe chinhu.
Muma betas azvino uno, tinowana nhau dzinotevera:
Walkie-Talkie anotiratidza mazano kubva kushamwari.
Iyo bhora Iye zvino Kutamba kunoonekwa pachiratidziri chikuru.
Unogona chinja Siri vhoriyamu yakazvimiririra kune yakasara yenguva kurira.
Isu tinoshuvira kuona munguva pfupi yapfuura dzimwe nhau dzezuva rehurukuro yaGunyana, pamwe nemhando nyowani dzeApple Watch, idzo dzinotarisirwa kunge dzichikura zvishoma kupfuura mamodheru azvino.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Apple inoburitsa watchOS beta 9 mazuva mashanu mushure me beta 5
Spark, AirMail 3, uye zvimwe zvakawanda. Zvakanakisa zvevhiki ndiri kubva kuMac
Chinja chero gwaro riite e-bhuku neThe Ebook Converter